Yazi iSeville April Fair | Izindaba Zokuhamba
Yazi iSeville April Fair
UCarmen Guillen | | Spain amadolobha, General, Ukuzilibazisa, Sevilla
Uma ungakaze uye ku- Seville Ephreli Fair Ngingakutshela ukuthi kungenye yalezo zinto kufanele uphile okungenani kanye empilweni yakho. Kungani? Kubumnandi obufaka phakathi, ukusondelana kwabantu bakhona, ukufunda ukudansa amaSevillana uma ungazi namanje futhi ngoba izinsuku ezimbalwa ubalekela yonke into futhi uzijabulise nje.
AbaseSevillian balithokozela kakhulu leli phathi futhi uma sengihlangene neSonto Elingcwele (esanda kwedlula) ngingaqunga isibindi ukusho ukuthi yizinto ezimbili ezinkulu okufanele zijatshulelwe futhi zihlale eSeville.
1 Izinsuku kanye nomlando wayo omncane
2 Amaphosta kanye nohlelo olujwayelekile lwe-Fair
3 Amathiphu ayisisekelo wokuzwa i-April Fair
Izinsuku kanye nomlando wayo omncane
Kulo nyaka iSeville April Fair inayo usuku lokuqala ngoLwesibili, Ephreli 12 ne ukuhlolwa kokukhanyisa okuzoqala ngo-00: 00 amahora. Kusuka lapho lapho singaqala khona ukulingana. Kulokhu kukhanyisa, kukhanyiswa izinkulungwane zama-light akhanyisa ukungena kanye nemigwaqo yendawo ebiyelwe (ngaphezu kwama-350.000 light bulbs). Kuphela ngeSonto, ngo-Ephreli 17 ngo-24: 00 ngokwethulwa kweziqhumane (okuvamile cishe kuwo wonke ama-fairs nakwezokuhambela). Ngabo lobo busuku lapho kukhiqizwa khona ukukhanya, kuyaziwa lapho njenge "Ubusuku benhlanzi encane."
I-Seville April Fair ibanjelwe uku khuthaza abaseSevillian bonyaka we-1842. Ekupheleni kwalowo nyaka, isiphepho sashiya iSeville ihlukumezekile. AbaseSevillian babengahambi ngaleso sikhathi ngenxa yezinjabulo eziningi futhi babedinga kakhulu isikhubekiso esasizobenza badedele usizi olunqwabelene (idolobha nalo belisenkingeni yezomnotho isikhathi eside). Kungaleso sikhathi-ke lapho amakhansela amabili kamasipala eza nalombono omuhle: ukuthola kabusha imicimbi emibili ejwayelekile yaseSeville, lena ngo-Ephreli nenye eyenzeka ngoSepthemba, esivele yanikezwa ngumthetho emuva ngo-1254 yiNkosi Alfonso X El Sabio .
Yileyo ndlela-ke okwazalwa ngayo okokuqala ngo-Ephreli Fair wezikhathi zanamuhla. Yavunywa nguMkhandlu Wedolobha ngoSepthemba 18, 1846 futhi yavulwa ngo-Ephreli 18, 1847 eSan Sebastián meadow, enamadokodo ayi-19 esewonke.
Yayinjalo impumelelo eyayinayo, ukuthi unyaka nonyaka, umbukiso wawungeke uphuthelwe. Eqinisweni, iSeville, njengoba sishilo phambilini, yayisenkingeni yezomnotho, yayise-April Fair yayo lapho yathola khona isixazululo: ibhizinisi, izingilazi ze-chamomile, izingoma, imidanso, injabulo, njll. Ukunikezwa okuhehayo kokuheha abantu!
Okujwayelekile kakhulu kokulungile ngaphandle kokungabaza inani elikhulu lamadokodo (ngaphezu kwe-1.040) esingakuthola lapho kokubili ukudla neziphuzo (i-rebujito yayo edumile kanye ne-chamomile yayo edumile) kuhlangabezana nokuthanda kwabo bobabili abaseSevillians nabavakashi abahlala lapho. Ukudla nokuphuza yizinjabulo ezimbili ezinkulu kakhulu zalesi sihle esivamile.
Amaphosta kanye nohlelo olujwayelekile lwe-Fair
Ngemuva kwalokho ungathola ifayela le- indiza ejwayelekile kusuka eFair lapho ungathola khona womabili amadokodo nepaki yokuzijabulisa.
Sethula ne iphosta esemthethweni we-Ephreli Fair walo nyaka, i-2016.
Amathiphu ayisisekelo wokuzwa i-April Fair
Yebo ukuhlala kahle ngo-Ephreli nokuthi awuphuthelwa yilokho okukufanele ngempela, sikulethela uchungechunge lwe amathiphu ayisisekelo ukuthi kufanele ukhumbule lapho ucwilisiwe noma ucwilisiwe phakathi kwama-sevillanas kanye «nenhlanzi ethosiwe»:
Yazi okuncane ngomlando wayo (Usuvele ukufezile lokhu kubonga kithi, eh?).
Kukhona Amadokodo okungena mahhala namadokodo okungena ngesimemo. Kukhona amathikithi wokungena mahhala ayi-16 esewonke ozokwazi ukubona indawo yawo kumephu ejwayelekile esike sayinikeza ngaphambili.
Hay izindawo ezimbili ehlukaniswe kahle: ukujabulisa usuku futhi i ubusuku obuhle. Emini ungathola amahhashi abo amahle ongahamba kuwo uzungeze izinkundla zezinkundla (zikhona kuze kube ngu-20: 00 kusihlwa) futhi ebusuku, inani labantu abasha liyanda.
Phatha Izicathulo ezinethezekile ukuhamba nokunyathela futhi ungakhathali ukuthi kungcola ngokungcola. I-fairground ise-Albero.
Inketho engcono kakhulu yokuya nokubuya embukisweni yiyona izithuthi zomphakathi ngoba phakathi kwalezo zinsuku kunensizakalo ekhethekile. Ukupaka eduze kwenkompolo kungaba umsangano wangempela, kungasho ukuthi umsebenzi "ongenakwenzeka".
Uma ukwazi futhi ufuna, vakashela indawo ngento enhle imvunulo yamaGypsy, Kungokwesiko. Yize uma ungakwazi, ungakhathazeki, ungahamba njengoba ufuna.
I-Las ezikhangayo eSeville, nakwamanye amazwe ase-Andalusia, aziwa ngokuthi «Amagajethi amancane«. Lezi zitholakala kokudumile "Umgwaqo Wesihogo" (igama abamnike lona ngevolumu ephezulu yomculo wakhe).
Kwamanye amadokodo ungathenga ukudla neziphuzo zakho nge ukheshi kepha kokunye kuyadingeka "Amavawusha".
La ukudla okujwayelekile ukuthi awukwazi ukuyeka ukuzibuza ukuthi yi- omelette nokuthi kanjani ukuphuza kabusha, ukuhlanganiswa okuqabulayo kakhulu kwe-chamomile kalamula.
I-Las izinsuku ezimbili ezibalulekile konke kuyisiqalo nesiphetho sombukiso. Enye yokukhanyisa kwayo okudumile kanti enye ngeziqhumane zayo.
Futhi ngokusho lokho, ithiphu eyodwa yokugcina: Jabulela!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Yazi iSeville April Fair
Indlela Ebonakalayo noma i-VMC (Izimo Zemozulu Ebonakalayo)